Sannadkii la soo dhaafay, waxaan dhiirraynay dabaysha iyo hirarka. Sannadka Cusub, marna ma ilaabi doonno ujeedkeenna asalka ah, horay ayaan u sii socono oo horay ayaan u soconnaa. Sanad Wanaagsan (Niu)!
Nofeembar 9-keeda waa Maalinta Dabka Qaranka ee Shiinaha. Muhiimaddiisu waa in lagu baraarujiyo dadka inay yeeshaan wacyigelin ka hortagga dabka iyo in la xuso geesiyaasheena waaweyn - dab-demiyaasha. ALUTILE Brand All Panel Dimensional Aluminium Core wuxuu ka kooban yahay seddex lakab oo ah aluminium, w ...
CADE (Bandhigga Naqshadeynta Naqshadeynta Shiinaha ee Shiinaha) Taariikhda Bandhigga: Oktoobar 29th ~ Nofeembar 1st, 2020 Booth Maya: W1.420 Bandhigga afarta maalmood socday ayaa dhammaaday. ALUTILE wuxuu qeexay hoolka bandhig faneed. Kooxda iibku waxay muujinayaan xirfad iyo hoolka bandhiga waxay muujinayaan xariifnimo. In kasta oo aan leenahay ...